Fine-Tuning the Word Completion for Text Documents
पाठ दस्तावेजका लागि शब्द समाप्ति ठीक - ट्यूनिंग
If you like it that LibreOffice automatically completes the words that you frequently use, you can make further adjustments to refine that behavior. If you want, you can also save the current list of collected words so that it can be used in the next session.
To fine-tune the word completion choose Tools – AutoCorrect Options - Word Completion and select any of the following options:
थप खाली स्थान क्यारेक्टर घुसाउँदा
खाली स्थान थप्नुहोस् चयन गर्नुहोस्.
स्वत:-शव्द सकिएपछि अर्को शव्दको तपाईँले पहिलो क्यारेक्टर टाइप गरेपछि खाली स्थान क्यारेक्टर सङलग्न हुन्छ. यदि अर्को क्यारेक्टर डेलिमिटर भएमा खाली स्थान क्यारेक्टर दमन गरिन्छ, जस्तै बिराम चिन्ह वा नयाँ पङ्क्ति क्यारेक्टर.
स्वीकार कुञ्जी चयन
सुझाव शव्द स्वीकार गर्न स्वीकार्नुहोस् सूची बाकस प्रयोग गरी कुञ्जी रोज्नुहोस् .
क्यारेक्टरहरूको सङ्ख्या चयन
क्यारेक्टरहरूको न्यूनतम सङ्ख्या सेट गर्न न्यूनतम. शव्द लम्बाइ बाकस प्रयोग गर्नुहोस् जुनमा शव्द सँग सूचीमा सङ्कलित हुनुपर्दछ.
संकलन शव्दहरूको क्षेत्र चयन
जब कागजात बन्द गरेको बेला, सूची बचत गर्नुहोस् अरू कागजातहरूमा पछि प्रयोग गर्नका लागि चयन गर्नुहोस् .
अन्य कागजातहरूका लागि सूची वैध छ जुन तपाईँले खोल्नु भएको थियो. जब तपाईँले अन्तिम LibreOffice कागजात छनोट गर्नुहुन्छ, शव्द सूची मेटाइन्छ.
यदि तपाईँले जाँचबाकस चयन गर्नु भएन भने, सूची मात्र वैध हुन्छ ज सम्म हालको कागजात खोल्दैन.
यदि तपाईँ शव्द सूची बन्द गर्न चाहनुहुन्छ हालको LibreOffice सत्र भन्दा लामो, कागजातको रूपमा बचत गर्नुहोस्, तलको सेक्सनमा बर्णनको रूपमा.
शव्द सूची सँग कार्य गर्दा
यदि स्वत हिज्जे परिक्षण विकल्प सक्रिय भयो भने, शव्दहरू मात्र जुन हिज्जे परिक्षणद्वारा निश्चित गरिएको थियो संकलन गरिन्छ.
प्राबिधिक टर्महरूको परिभाषित सेट सँग जहिले पनि सुरु गर्नका लागि शव्द सूची प्रयोग गर्नुहोस् शव्द पूर्णता सुविधाका लागि.
पाठ कागजात खोल्नुहोस् जसले नियमहरू समावेश गरेको छ जुन तपाईँ शव्द पूर्णताका लागि प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ.
शव्द पूर्णता सुविधा शव्दहरू संलग्न गर्दछ.
सबै वा केही शव्दहरू सूचीमा चयन गर्नुहोस्.
सबै चयन गरिएका शब्दहरूलाई क्लिपबोर्डमा प्रतिलिपि गर्न आदेश Ctrl + C प्रयोग गर्नुहोस्। क्लिपबोर्डलाई नयाँ कागजातमा टाँस्नुहोस् र सङ्कलन गरिएका शब्दहरूको सन्दर्भ सूची प्राप्त गर्न यसलाई सुरक्षित गर्नुहोस्।
पछि तपाईँ सन्दर्भ सूची खोल्न सक्नुहुन्छ र स्वत: शव्दहरू संकलन गर्नुहोस्, त्यसैले शव्द पूर्णता सुविधा शव्दहरूको परिभाषित सेट सँग सुरु हुन्छ.
This page is: /text/swriter/guide/word_completion_adjust.xhp
Title is: Fine-Tuning the Word Completion for Text Documents